Maamulka gobolka Banaadir oo qorsheynaya doorasho ka dhacda caasimada 2020 – Kalfadhi
Home Dowladda Hoose
Maamulka gobolka Banaadir oo qorsheynaya doorasho ka dhacda caasimada 2020
in Dowladda Hoose, Warar
Duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Yariisow) ayaa sheegay in maamulkiisa uu xooga saarayo doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda caasimada sanadka 2020-ka.
Qoraal uu xalay bartiisa Twitter soo dhigay ayuu guddoomiyaha ku caddeeyay in ay doonayan in shacabka ku nool magaalada Muqdisho ay talo ku yeeshan siyaasada caasimada.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dedaal badan ugu jirta in marka la gaaro sanadka 2020-ka ay caasimada Muqdisho iyo guud ahaan dalka ka dhici karaan doorasho qof iyo cod ah balse dowladii ka horreysay ayaa ku guuldareystay.
Dhinaca kale,Maamulka Banaadir ayaan weli helin matalaad dhinaca siyaasada si ay wax ula qeybsadan maamulada kale ee ka jira wadanka,sida ay ku dooddan siyaasiyiinta iyo wax garadka ka soo jeeda Muqdisho.
Wasiirka ganacsiga oo hortagay xildhibaannada golaha shacabka
Ra’iisul wasaare Khayre oo maanta ka qeybgalaya shirka dib u eegista dastuurka